Ugboro ole ka ị na-ahụ foto ndị gba ọtọ na mberede?
□ Anaghị m ahụ ya
□ Ọ na-ara ahụ́
Olee ebe ị na-ahụkarị ya?
□ N’ụlọ akwụkwọ
□ Na TV
□ N’ebe ọzọ
Gịnị ka ị na-eme ma ị hụ ya?
□ Ana m apụ ozugbo.
□ Ana m eletụ ya anya ka m mata otú ọ dị.
□ Ana m eleru ya anya, na-achọdị ọzọ.
MGBE papa gị na mama gị hà ka gị, ndị chọrọ ile foto ndị gba ọtọ na-achọ ya achọ. Taa, ọ dị ka ọ̀ na-achụzi ndị mmadụ ọsọ. Otu nwa agbọghọ dị afọ iri na itoolu kwuru, sị, “Mgbe ụfọdụ n’Ịntanet, ọ na-abụ m na-achọ ihe, na-azụ ihe, ma ọ bụ sị ka m lee akwụkwọ ụlọ akụ̀ ziteere m, foto ndị gba ọtọ apụta na mberede!” Ọ na-eme eme. N’otu nchọpụta e mere, n’ime mmadụ iri bụ́ ndị na-eto eto dị agbata afọ asatọ na afọ iri na isii, mmadụ itoolu kwuru na ha ahụtụla foto ndị gba ọtọ n’Ịntanet n’amaghị ama—ọ na-abụkarị mgbe ha na-arụ ihe ndị nkụzi nyere ha ka ha rụọ n’ụlọ!
Ebe ọ bụ na foto ndị gba ọtọ juru ebe niile, i nwere ike ịjụ, sị, ‘Ọ̀ dị njọ ile ya?’ Azịza ya bụ ee! Ile foto ndị gba ọtọ na-eme ka ndị e sere foto ha na ndị na-ele ya ree ùgwù ha. Ọ na-emekarị ka ndị mmadụ kwaa iko. Ma e nwere nsogbu ndị ọzọ ọ na-akpata.
Ile foto ndị gba ọtọ nwere ike iri mmadụ isi, kpatara ya nsogbu na-anaghị akwụsị akwụsị. Dị ka ihe atụ, chee echiche banyere otu nwoke aha ya bụ Jeff, bụ́ onye kwụsịrị ile foto ndị gba ọtọ. Mgbe afọ iri na anọ gachara, o kwuru, sị: “Mụ na ya ka na-alụ ọgụ kwa ụbọchị. N’agbanyeghị na ọ naghịzi agụsi m agụụ ike ile ya, ọ ka na-agụ m. M ka na-achọ ile ya. Ndị m lere ele apụbeghị m n’isi. A sị na m ma, agaraghị m amalitedị omume ọjọọ a. Mgbe m malitere ile ya, echere m na o nweghị ihe ọ ga-eme m. Ma, anya edoola m ugbu a. Ile foto ndị gba ọtọ na-emebi ihe. Ọ rụrụ arụ. Ọ na-ewedakwa ma ndị e sere foto ha ma ndị na-ele ya ala. N’agbanyeghị ihe ndị na-akwado ya nwere ike ikwu, o nwetụdịghị uru ọ bụla dị n’ile foto ndị gba ọtọ.”
Tụlee Ihe Nwere Ike Ime Ka Ị Hụ Ya
Gịnị ka ị ga-eme ka ị ghara ịhụ foto ndị gba ọtọ n’amaghị ama? Buru ụzọ tụlee ihe nwere ike ime ka ị hụ ya. Ò nwere ihe na-emekarị ka ị hụ ya? Tụlee ihe atụ ndị a:
Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ibe gị hà nwere ike iji kọmputa ma ọ bụ ekwe ntị zitere gị foto ndị gba ọtọ? Ya bụrụ otú ahụ, ọ ka mma ịkagbu ozi ha n’emepeghị ya emepe.
Mgbe ị na-achọ ihe n’Ịntanet, ò nwere okwu ụfọdụ ọ̀ na-abụ i denye, gị enweta ozi na-agwa gị ka i mepee ebe ọzọ n’Ịntanet? Ọ bụrụ na ị ma na o nwere ike ime, ọ ga-eme ka ị kpachara anya nke ọma n’okwu ndị ị na-edenye mgbe ị na-achọ ihe.
N’okpuru ebe a, dee ihe ndị merela ka ị hụpere foto ndị gba ọtọ.
Ọ̀ dị ihe i nwere ike ime ka ị ghara ịhụpere ya mgbe ọzọ? Ọ bụrụ na ọ dị, dee ihe i bu n’obi ime n’ebe a.
Ọ Bụrụ na O Riela Gị Isi
Ịhụ foto ndị gba ọtọ na mberede na ịkpachara anya na-ele ya abụghị otu. Ọ́ bụrụkwanụ na o riwela gị isi? N’eziokwu, ịkwụsị ya adịghị mfe. Dị ka ihe atụ: Ka e were ya na e ji eriri na-esighị ike kekọta gị aka abụọ. I nwere ike ịdọbi ya ma i mee ka ị̀ na-agbasa aka gị. Ma ọ́ bụrụkwanụ na ọ bụ eriri siri ike? Ịdọbi ya ga-esitụrụ gị ike. Ọ bụ ụdị ihe ahụ na-eme ndị na-ele foto ndị gba ọtọ mgbe niile. Ka ha na-elekwu ya, otú ahụ ka ọ na-ekekwu ha agbụ. Olee otú ị ga-esi akwụsị ile foto ndị gba ọtọ ma ọ bụrụ na o keela gị agbụ?
Ghọta na ile foto ndị gba ọtọ jọgburu onwe ya. N’eziokwu, foto ndị gba ọtọ bụ ihe Setan ji agbalị imebi ihe Jehova kere ka a na-akwanyere ùgwù. Ịghọta foto ndị gba ọtọ otú ahụ ga-enyere gị aka ‘ịkpọ ihe ọjọọ asị.’—Abụ Ọma 97:10.
Cheta nsogbu ọ ga-akpatara gị. Ile foto ndị gba ọtọ na-eme ka di na nwunye tisaa. Ọ na-ere ùgwù ndị e sere foto ha. Ọ na-emebikwa ùgwù onye na-ele ya. Baịbụl nwere ezigbo ihe mere o ji sị: “Onye maara ihe bụ onye hụrụ ọdachi gaa zoo.” (Ilu 22:3) Dee ọdachi nwere ike ịdakwasị gị ma ọ bụrụ na ị na-ele foto ndị gba ọtọ.
Gị na anya gị gbaa ndụ. Job bụ́ nwoke kwesịrị ntụkwasị obi kwuru, sị: “Mụ na anya m gbara ndụ kpebie na o nweghị mgbe m ga-ele nwagbọghọ ọ bụla anya ọjọọ.” (Job 31:1, Baịbụlụ Nsọ nke International Bible Society) Ihe ụfọdụ i nwere ike ‘ikpebi’ ime bụ:
Agaghị m aga n’Ịntanet mgbe naanị m nọ n’ụlọ.
M nọrọ n’Ịntanet nweta ozi ma ọ bụ hụ ebe na-egosi omume rụrụ arụ, m ga-emechi ya ozugbo.
Ọ bụrụ na mụ elee ya ọzọ, m ga-agwa enyi m torola eto.
Ì nwere ike icheta otu ihe ma ọ bụ abụọ ọzọ ị ga-ekpebi ime, ga-eme ka ị ghara ile foto ndị gba ọtọ? I cheta, dee ha ebe a.
Tinye ya n’ekpere. Otu ọbụ abụ kpekuru Jehova ekpere, sị: “Mee ka anya m ghara ịhụ ihe na-abaghị uru.” (Abụ Ọma 119:37) Jehova Chineke chọrọ ka ị ghara ile ya. Ọ ga-enye gị ike ime ihe ziri ezi!—Ndị Filipaị 4:13.
Kọọrọ ya mmadụ. Ọ bụrụ na i nwee onye ị na-akọrọ ihe dị gị n’obi, ọ ga-enyere gị aka ịkwụsị omume ahụ. (Ilu 17:17) Dee aha onye torola eto obi ga-eru gị ala ịgwa ya.
Ka obi sie gị ike na i nwere ike ịkwụsị ile foto ndị gba ọtọ. N’eziokwu, mgbe ọ bụla ị na-eleghị ya, i nweela otu mmeri doro anya. Kọọrọ Jehova banyere mmeri ahụ, keleekwa ya maka ike o nyere gị. Ile foto ndị gba ọtọ bụ ọrịa. Na-echeta na ọ bụrụ na ị kwụsị ya, ị ga-eme ka obi Jehova ṅụrịa!—Ilu 27:11.
“Ya mere, meenụ ka akụkụ ahụ́ unu ndị dị n’elu ụwa nwụọ n’ihe banyere ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu, nke bụ́ ikpere arụsị.”—Ndị Kọlọsi 3:5.
Hụ na kọmputa gị nwere ihe na-eme ka mmadụ ghara ịbanye n’ebe foto ndị gba ọtọ dị. Ọ bụrụkwa na onye ị na-amaghị ejiri kọmputa zitere gị ozi, apịla ebe ọ sịrị gị pịa.
Ọ bụrụ na ara ile foto ndị gba ọtọ na-agba mmadụ, o yiri ara mmekọahụ ahụ gbara ndị mmụọ ọjọọ n’oge Noa.—Jenesis 6:2.
Ihe m ga-eme ga-enyere m aka izere ebe e nwere foto ndị gba ọtọ bụ ․․․․․
● Olee otú foto ndị gba ọtọ si emebi ihe e kwesịrị ịkwanyere ùgwù?
● Olee otú ị ga-esi enyere nwanne gị ị tọrọ aka ma ọ bụrụ na ọ na-ele foto ndị gba ọtọ?
[Ihe odide gbatụrụ okpotokpo nke dị na peeji nke 278]
“Mgbe m na-amalitebeghị ịmụ Baịbụl, o siri ike ịhụ ụdị ọgwụ ike na-erighị m ahụ́. Ma n’ime ihe niile riri m ahụ́, nke kacha siere m ike ịkwụsị bụ ile foto ndị gba ọtọ. Ọ bụ naanị aka Jehova nyeere m mere ka m kwụsị ya.”—Jeff
[Foto dị na peeji nke 276]
Ile foto ndị gba ọtọ na-eri mmadụ ahụ́—ka mmadụ na-ele ya, otú ahụ ka ọ na-esikwuru ya ike ịkwụsị ya
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Mere Ekwesịghị M Ile Foto Ndị Gba Ọtọ?
yp2 isi 33 p. 273-278